Impilo, Nezithasiselo nezakhamzimba
Kungakanani umzamo wenzé owesifazane ukuze kuzuzwe sibalo ephelele bese balondoloze isisindo sakho ezingeni lelifanele! Phakathi umsebenzi noma indlela yokudla ehambisana nempilo umzimba alisebenzisi nje amandla, kodwa futhi izakhi ezidingekayo ukuze ukusebenza evamile zonke izinhlelo eziyishumi nemitshingo. Yiqiniso, badinga ukugcwalisa. Ngenxa yale njongo, a eziyinkimbinkimbi amavithamini namaminerali ngokukhethekile abesifazane, equkethe umzimba udinga amaminerali, ezikhishwe amakhambi, kusiza ashise amanoni kanye has imiphumela ezuzisayo on kwemisipha ukukhula. Lesi sidakamizwa «Opti Abesifazane»: Izibuyekezo ngakho, indlela kanye nezici isicelo, kanye nezinye izici, bheka kamuva kulesi sihloko.
Obani okufanele bahole lamavithamini - izeluleko kongoti
izidakamizwa ewusizo Ikakhulukazi abesifazane ukuchitha isikhathi esiningi ejimini, impilo club noma pool. Ngosuku Kunconywa ukuba asebenzise Vitamin amaphilisi amabili; lokhu kuyoba okwanele ukuba silondoloze ubuhle bowesifazane umusa. Sanyathelisa izidakamizwa e amaphasela 60 futhi 120 amaphilisi, intengo yayo iqala ruble 700. Isexwayiso: ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi amavithamini, kutuswa bonana nodokotela wakho kuqala. Lokhu kuyiqiniso maqondana «Opti Abesifazane», ngenxa yokuthi ziqukethe ezingaphezu kwezingu-40 izithako (amavithamini namaminerali), udinga ukususa kungenzeka ukuthi ukungabekezelelani kunoma wabo, kanye komzimba. Sicela uqaphele ukuthi uma ngemva kokuthatha ungazizwa kahle, kufanele kuncishiswe Isikali komunye capsule ngosuku.
Yilokho odokotela bethi mayelana izidakamizwa «Opti Abesifazane», ukubuyekezwa yezokwelapha zingahlukaniswa zibe nalokhu okulandelayo:
Isakhiwo Vitamin eziyinkimbinkimbi siqukethe namaminerali adaliwe ikhumbula izici umzimba female. Ngokwesibonelo, i-folic acid, i-calcium, okusansimbi iodine nginomdlandla, uqinise ngezipikili nomhlane izinwele.
Lesi sidakamizwa kungasiza ngcono impilo yabesifazane, balahle ubuhlungu esesikhathini.
Nokho, kuzo zonke izimo zawo uqaphele ukuthi ukweqisa izidakamizwa kungenzeka yisisu, ngakho sebenzisa amavithamini Isilinganiso yeqe contraindicated.
Futhi, ubukhulu amaphilisi mikhulu, badinga ukuba baphuze amanzi.
Amavithamini «Opti Abesifazane»: izibuyekezo zamakhasimende, Izimo
It nanela ukuthi ithuluzi akunakubangelwa hhayi kuphela amavithamini, kodwa futhi ukuba ezemidlalo umsoco, ngoba isetshenziswa ibhekwa wezokudla ukuze kwandiswe yemisipha nomzimba embossed. Uma ngaphezu kwale eziyinkimbinkimbi uphuza noma iyiphi nezinye izakhamzimba, sibukisise ukwakheka kanye khona izingxenye ezifanayo. Njengoba ukweqisa izidakamizwa amavithamini kancane ngendlela ebonakala ingenangozi kungaholela imiphumela engathandeki kakhulu ezifana ukuhlanza, isisu ukusabela kahle futhi iguliswa - ukuqubuka esikhumbeni, ukucasuka, njll ...
Yilokho abakushoyo abathengi owasebenzisa «Opti Abesifazane»: Izibuyekezo ngakho, kanye kwanoma iyiphi ukulungiselela ezinjalo zingahlukaniswa zibe emihle nemibi. Ngokwesibonelo, abanye bathi amavithamini kakhulu ngcono ukubukeka impilo jikelele, anika amandla futhi baphakamisa kwemizwelo. Kodwa akuzona ezishibhile ukuthenga umkhiqizo ofanayo kumele ihlolwe emkhakheni, kungenjalo ungathola inkohliso - kuba kokuma main mayelana umthengi «Opti Abesifazane». Izibuyekezo nawo aqukethe ukwaziswa ukuthi ukusetshenziswa njalo lamavithamini incipha umuzwa indlala, ukulala ebusuku buyaqina, futhi isikhathi sokuphumula ngemva kokuthatha izidingo eziyinkimbinkimbi kancane. Noma kunjalo, kubalulekile ukuba acabangele ukuthi abantu abafani, omunye leli thuluzi ekahle, kodwa othile kufanele bazikhethele isethi ehlukile amavithamini. Manje onazo ulwazi olunzulu on amavithamini «Opti Abesifazane»: kanjani ukuthatha kwesokudla Izibuyekezo eziyinkimbinkimbi ngakho kanye contraindications. Sithemba ukuthi i-athikili yethu kuzokusiza uthole ikhambi elifanele kakhulu okubuyisela ngawe.
B2 (Vitamin): izakhiwo kanye indima emzimbeni. Ukudla okune-Vitamin B2
Amavithamini Okuhle Ngomsebenzi induna ebusweni
Ingabe amavithamini ziyingozi? Indima amavithamini. amavithamini Ithebula
Amavithamini "Vitrum Nobuhle". Izibuyekezo sokulungiselela
Yini engcono ukuba baphuze amavithamini ngesikhathi lactation?
Vitamin B10: yokusetshenziswa
Uhlobo luni lwe-hood yokuthenga ukuthenga? Iphethini ngaphansi kwe-hood foil: ukubuyekezwa
Granola Ukudla - kwasekuseni enempilo ukuze usuku asebenzayo
Ukukhathazeka okunamahloni okunama-cystic ama-glymetic glands: ukwelashwa. Ukukhathazeka kwe-fibro-cystic: izimpawu
Lake Utkul (Altai esifundeni) - indawo yokudoba kanye nomndeni iholide
Ihhotela Diamond Elite Hotel & Spa 5 *, Turkey, Side: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Ilahle block ngezandla zakho: efanele
Ingabe utshwala futhi luhambisana "Kagocel"? Yokusetshenziswa nempendulo